गोसाइँकुण्ड मेला जाँदा लेक लाग्ने समस्याबाट यसरी बच्न सकिन्छ ? जान्नसहाेस् - ज्ञानविज्ञान
गोसाइँकुण्ड मेला जाँदा लेक लाग्ने समस्याबाट यसरी बच्न सकिन्छ ? जान्नसहाेस्
Hindu pilgrims walk to sacred Gosainkunda Lake high in the Nepali Himalayas on August full moon. Pic copyright Timothy Allen. http:/humanplanet.com
के तपाईँ यसपटक गोसाइँकुण्ड जाने तयारीमा हुनुहुन्छ ? अनि तपाईँलाई त्यहाँ जाँदा लेक लाग्न सक्नेसम्भावना बारे कत्तिको थाह छ ? छैन भने थाह पाई राख्नु । किनकी गोसाइँकुण्डसंग मेलासंग जोडिने अर्को पाटो हो लेक लाग्ने (स्वास्थ्य) समस्या हो ।
४ हजार ३८० मिटरको उचाईँमा रहेको धार्मिक तथा पर्यटकीय गन्तब्य गोसाइँकुण्ड तालको दर्शन गर्न हरेक बर्ष जनै पुर्णिमाको बेला दशौँ हजार बढी पर्यटक आउने गर्छन् ।
र हरेक बर्ष सो मेलामा आउने कतिपयको ज्यान जाने गरेको छ भने कतिपय सिकिस्त विरामी भएर हेलिकप्टरबाट उद्धार गरिएका पनि छन् । ज्यान जाने र बिरामी हुने दुबैको कारण लेक लाग्ने समस्या हो ।
लेक लाग्ने समस्या के हो ?
धेरै उचाईँमा जाँदा हुने एक किसिमको स्वास्थ्य समस्या । धैरै उचाईँमा जाँदा अक्सिजनको कमी हुने भएकोले यस्तो समस्या जुन सुकै व्यक्तिलाई देखिन सक्छ । प्राय २५००/ ३००० मिटर भन्दा माथिको उचाईमा पुग्दै गर्दा यस्तो समस्या देखिन सक्छ ।
लेक लाग्दा के हुन्छ ?
टाउको दुख्ने, बान्ता हुने, धेरै थकान हुने, रिंगटा लाग्ने, सास फेर्न गाह्रो हुने, निद्रा पर्न समस्या हुने जस्ता लक्षण देखिनु लेक लागेको संकेत हुन सक्छ।यस्तो कुनै लक्षण देखा परेमा बाँकी उचाई चढ्ने प्रयास नगरी एक जना साथीसंग कम उपचाई तर्फ झर्नु उत्तम हुन्छ ।
कतिपयले यस्तो समस्या आएपछि घोडाको प्रयोग अर्थात घोडा चडेर जबर्जस्ति माथि जाने जाने गरेको पाइन्छ तर त्यसो गर्दा पनि यो समस्याको जोखिम उतिकै वा झनै बढी हुन सक्छ।यस्ता लक्षणलाई बेवास्ता गरी माथि उचाई चड्दा समस्या जटिल हुने र मस्तिस्क अनि फोक्सोलाई असर गरेर ज्यानै जानेसम्मको खतरा हुन्छ ।
लेक लाग्ने समस्याबाट जोगिन निम्न उपाय गर्न सकिन्छ
१. बिस्तारै उचाई चढ्ने ( दिनमा ३०० देखि ५०० मीटर सम्म मात्र)।
२. प्रसस्त पानी पिउने,
३. धेरै शारीरिक थकान बाट जोगिने,
४. स्वास्थ्यकर्मीको सल्लाह लिएर एसिटाजोलअमाईड औषधिको प्रयोग गर्ने
५. लेक लाग्ने लक्षण देखिएमा साथीसहित कम उचाइमा झर्ने
अत : अरुको देखासिकी गर्न पूर्वतयारीविना उचाईमा जाने असुरक्षित यात्रा नगरौं। लेक लाग्ने समस्या बारे जानकार भएर मात्र जाऔं र लेकमा यात्रा गर्न जानेहरुलाई पनि जानकारी दिऔं।
लेक लाग्नु अर्थात अंग्रेजिमा अल्टीट्यूड सिकनेस । यसलाई एकयूट माउण्टेन सिकनेस, हाइपोबेरोपेथी, अकोस्टा डिजिज पनि भनिन्छ ।लेक लाग्नुको कारण अक्सिजनको मात्रा नपुगेरै हो । हामी जति जति उचाईमा गयो त्यति बोटविरुवा कम पाइन्छन् । बोट बिरुवा जति कम हुँदै जान्छन् , त्यति अक्सिजनको मात्रा कम हुन्छ ।
त्यसैले उचाईमा जाँदा शरिरलाई अक्सिजनको मात्रा पुग्दैन । अनि स्वासप्रश्वास बढ्नु, टाउको दुख्नु, निंद्रा लाग्नु, शरिर कमजोर हुनु, होस गुमेजस्तो हुनु आदि लेक लाग्नुका लक्षण हुन् । राती निंद्रामै स्वासप्रश्वासमा समस्या भएर ब्यूंझिनु जस्ता लक्षण देखिन्छन्।
लेक लागेपछि ज्यान जाने खतरा बढ्छ । शरिरमा अक्सिजनको मात्रा कम हुने बित्तिकै शरिरको सबै अंगमा यसले असर गर्छ र बिरामीको केही घण्टामै मृत्युसम्म हुनेगर्छ ।
लेक लागिहालेमा पहिलो विकल्प भनेको तल झर्ने नै हो । कम्तिमा १ सय देखि २ सय मिटर फर्किहाल्नु पर्छ ।उचाईमा जाँदा धेरैभन्दा धेरै तातो पानी पिउने, झोल पेय पदार्थ जस्तै सुप, जुस पिउनुपर्छ । जसले शरिरमा अक्सिजनको मात्रा बढाउँछ ।उचाईमा अल्कोहल पिउन हुन्न । केहि गरि कम नभए रेस्क्यूकालागि सम्पर्क गर्नुपर्छ ।
व्यायाम गर्नुस्,लेक लाग्दैन
हिमाल चढ्ने पर्वतारोहीलाई लेक लाग्नु धुमपान गर्ने खराब अम्मल र नियमित व्यायामको बानी नहुनु प्रमुख कारण भएको विज्ञहरुले बताएका छन् ।
नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानद्धारा ललितपुरमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा मलिकुलर जैविक अध्ययन संस्थान इटालीका प्रोफेसर डा पाओलो सेरेटेलीले हालैको अनुसन्धानबाट अरूको तुलनामा धुमपान गर्ने खराब अम्मल र नियमित व्यायामको बानी नभएका ९३ प्रतिशतलाई हिमाल चढ्दा लेक लाग्ने गरेको पाइएको जानकारी दिए ।
धुँवा बढी हुने भान्छामा काम गर्ने महिलाले सुधारिएको चुल्हो प्रयोग गरेकालाई यो समस्या नआउने सन् १९५३ देखि सन् २०१२ सम्म ६० वर्ष गरेको अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको उनले बताए ।
छलफल कार्यक्रममा इटालीको फेरार विश्वविद्यालयको जैविक खेल अध्ययन केन्द्रका श्वासप्रश्वास रोग निर्देशक प्रोफेसर अन्नालिसा कोगोले हिमाल चढ्ने मात्र नभई उच्च हिमालका स्थानीय बासिन्दाको स्वास्थ्यका विषयमा पनि गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने औँल्याए ।
थोरै समयका लागि हिमाल चढ्न जानेले प्रविधिको प्रयोगबाट जोखिम कम गर्ने उपाय निकाले पनि उच्च हिमाली क्षेत्रका बासिन्दाका लागि कसैले ध्यान पु¥याउन नसकेको उनले बताए ।
प्रोफेसर कोगोले सन् १९६३–१९६८ सम्मको पाँच वर्षमा आठ हजारभन्दा बढी उचाइका १७ वटा हिमाल चढेकामध्ये सबैभन्दा बढी लेक लागेर १६३ जनाको ज्यान गएको तथ्याङ्क पेश गरिन । नेपालका लागि इटाली राजदूत डेनियल म्यान्सिनीले नेपालको पर्यटकीय प्रवद्र्धन गर्न स्वस्थ जीवनको अभ्यासमा हिमाली क्षेत्रमा विशेष कार्यक्रमको आवश्यकता रहेको बताए ।
नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका उपकुलपति प्राध्यापक डा सुरेन्द्रराज काफ्ले, सचिव प्रकाशचन्द्र अधिकारी, योजना तथा अनुगमन महाशाखाका प्रमुख चिरञ्जीवी रेग्मीले पनि उच्च हिमालमा लेक लाग्ने समस्या र समाधानका लागि सहयोग समन्वय आवश्यक रहेको बताए ।
खुट्टा दुख्छ ? यस्ता छन् कारण र उपचार विधि
स्वास्थ्यका दृष्टिको हिँड्नु निकै फाइदाजनक हुन्छ । यसलाई व्यायामको सबैभन्दा सजिलो उपाय मानिन्छ । यद्यपि त्यसबेलासम्म मात्र हिँड्न सकिन्छ, जबसम्म हाम्रो खुट्टा दुख्दैन ।
त्यसो त खुट्टा दुख्नुलाई सामान्य समस्या मानिन्छ । हामीमध्ये धेरैजसो खुट्टाको दुखाइबारे त्यतिबेलासम्म सचेत हुँदैनौं, जबसम्म यसले दैनिक जीवनमा असर पार्दैन । शरीरको सम्पूर्ण भार खुट्टामै पर्ने भएकोले यसमा केही समस्या देखिए बेलैमा सजग हुनुपर्छ ।
खुट्टा दुख्ने समस्या बढ्दो उमेर, मोटोपन र शारीरिक अस्वस्थतासित सम्बन्धित हुने ‘जर्नल अफ फुट एन्ड एन्कल रिसर्च’ (२००८) मा प्रकाशित एक अध्ययनले जनाएको छ । अध्ययन अनुसार, खुट्टा दुख्ने समस्या पुरुषमा भन्दा महिलाहरुमा बढी हुन्छ । जीवनशैली तथा स्वास्थ्य समस्याको कारण खुट्टा दुखाइ हुन सक्छ ।
खुट्टाको दुखाइ वा असहजपना विशेषगरी खुट्टाको कुर्कुच्चा, पैंताला लगायत भागमा बढी हुने गर्छ । यस्तो दुखाइ सामान्यदेखि असह्य हुनेसम्मको अवस्थामा पुग्न सक्छ । कसैलाई थोरै समय र कसैलाई लामो समयसम्म यस्तो पीडा रहन्छ ।कतिपय पीडा सामान्य उपचारपछि घरमै ठीक हुन्छ भने लामो समयसम्म पीडा भइरहेमा चिकित्सकको परामर्श लिनुपर्छ ।
खुट्टा दुख्ने कारण र समाधानका उपाय यस्ता छन्ः
अग्लो हिल भएको जुत्ता
खुट्टा दुख्नुको प्रमुख कारणमध्ये अग्लो हिल भएको जुत्ताको प्रयोग पनि एक हो । २ं५ इन्चभन्दा बढी हिल भएको जुत्ताले पैंतालामा अधिक दबाव सिर्जना गरी पैैंतालाको आकारलाई साँघुरो बनाइदिन्छ, जसले गर्दा पीडा हुन्छ ।हिल जुत्ताको प्रयोगले खुट्टा पोल्ने, मर्कने जस्ता समस्या बढाउँछ ।
– सही सन्तुलन र कम दबावको लागि बाक्लो हिल भएको जुत्ताको प्रयोग नगर्ने ।
– औंला राख्ने ठाउँमा खुला भएको उच्च हिलयुक्त जुत्ताको प्रयोग गर्ने ।
– साँझमा करिब १५ मिनेटका लागि खुट्टालाई नुनपानीमा डुबाउने ।
– सुत्नुअघि खुट्टाको राम्ररी मसाज गर्ने । यसबाट रक्तसञ्चारलाई प्रभावकारी बनाई दुखाइ कम गर्छ ।
कसिलो जुत्ताको प्रयोग
धेरै कसिलो जुत्ताको प्रयोगले पनि खुट्टा दुख्ने गर्छ । कसिला जुत्ताले खुट्टाका औंलाहरुमा दबाव पर्ने गर्छ । लामो समयसम्म असजिलो जुत्ताको प्रयोगले शरीरको मांसपेशी, जोर्नी, खुट्टाको लिगामेन्ट, पैंताला, कम्मर तथा पिठ्युमा हानि पुर्‍याउँछ ।ढल्किँदो उमेरसँगै खुट्टाको बनावट परिवर्तन हुने गर्छ । त्यसैले जुत्ता किन्न जाँदा खुट्टाको नाप लिएर मात्र जुत्ता छान्ने गरौं ।
– गुणस्तरीय र खुट्टालाई आरामदायी हुने जुत्ता लगाउने ।
– ६ देखि आठ महिनाको अन्तरालमा नयाँ जुत्ता लगाउने ।
– ज्हिले पनि साँझतिर जुत्ता खरिद गर्ने । दिनभरको हिँड्डुलले खुट्टामा बढी सुजन हुने भएकोले त्यसबेला खरिद गरेको जुत्ता आरामदायी हुन्छ ।
– जुत्ता खरिद गर्दा जहिले पनि दुवै जुत्ता लगाएर केही कदम हिँड्दै सजिलो भए-नभएको जाँचौं ।
गर्भवती भएको बेला बान्ता हुने, ढाड दुख्ने जस्तै खुट्टा दुख्ने समस्या पनि हुन्छ । बढ्दो तौलका कारण गर्भावस्थामा खुट्टामा बढी भार पर्ने गर्छ, जसले गर्दा खुट्टा दुख्ने र थाक्ने समस्या हुन्छ ।
यस्तो बेला बढ्दो तौलकै कारण घुँडा र पैंतालामा बढी दबाव हुन्छ । यस्तो समस्या गर्भावस्थाको तेस्रो महिनादेखि सुरु हुन्छ । बच्चाको जन्मसँगै दुखाइ हराउँछ ।
गर्भावस्थामा हुने खुट्टाको दुखाइ कम गर्ने तरिका
– खुट्टा लामो समयसम्म नटेकी सकेसम्म उचालेर राख्ने ।
– शरीरमा पानीको अभाव हुँदा खुट्टा सुनिने र दुख्ने भएकोले बढी झोल पदार्थ सेवन गर्ने ।
– बसेर गोलीगाँठोभन्दा मुनिको भागलाई गोलाकार रुपमा घुमाउने । यस्तो व्यायामले गोलीगाँठोमा रक्तसञ्चारलाई प्रभावकारी बनाउँछ ।
खुट्टाको नङ बढ्नु
खुट्टाको नङ बढ्दा पनि पैंतालामा बेलाबखत समस्या बढ्ने गर्छ । नङ बढेर औंलाको छेउछाउमा गढेमा नङछुरी भएर दुखाइ बढ्छ । यसैले तपाईंले बेलाबेलामा नङ काट्न ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।कसिलो जुत्ताको प्रयोगले पनि नङछुरी भएर खुट्टामा जलन हुन्छ ।
– खुट्टाको दुखाइ, जलन , सुजन कम गर्न केही समय तातोपानीमा खुट्टा डुबाउने । अझ प्रभावकारी फाइदा लिन फिट्किरी वा एप्पल साइडर भेनेगरलाई पानीमा मिसाउने ।
– खुट्टालाई पानीमा डुबाएपछि छालामा गढेको नङलाई सुती कपडाले विस्तारै माथि निकाल्ने ।
– औंलामा संक्रमण भएको छैन भने छालामा गढेको नङ आफैंले काट्न सक्नुहुन्छ । संक्रमण भइसकेको छ भने चिकित्सकको परामर्श लिनु उचित हुन्छ ।
लामो समयसम्म उभिनु
कामको दौरान लामो समयसम्म उभिइरहँदा खुट्टामा पीडा तथा सुजन उत्पन्न गराउँछ ।
– कामको दौरान लामो समय उभिनुपर्छ भने सजिलो खालको जुत्ता लगाउनुस् ।
– उभिँदा शरीरको वजनलाई एउटा खुट्टाबाट अर्को खुट्टामा आलोपालो सार्नुस् ।
– हरेक घण्टा उभिएपछि कम्तीमा दश मिनेट आराम गर्नुहोस् । समय-समयमा खुट्टा तन्काउनुस् ।
– सुत्दा आफ्नो खुट्टालाई शरीरभन्दा केही माथि उठाउँदा पनि राहत मिल्छ ।
चौडा पैंताला जन्मजात हुने समस्या हो । त्यस्ता मानिसलाई खुट्टा दुख्ने समस्या हुनु सामान्य मानिन्छ । यस्तो समस्या अग्लो हिल प्रयोग गर्ने तथा लामो समयसम्म उभिने मानिसहरुमा पनि देखिने गर्छ ।
– खुट्टालाई आराम दिलाउन दुबो भएको चौरमा खाली खुट्टाले केही समय हिँड्ने गरौं ।
– कुर्कुच्चा तन्काउने व्यायाम गरौं ।
– जहिले पनि खुट्टाको बनावटलाई टेवा दिने खालको जुत्ताको प्रयोग गरौं ।
Don't Miss it मानसिक तनावबाट मुक्त रहनका लागी अपनाउनुहाेस् यी तरीकाहरू
Up Next यी खानेकुरा खानुहाेस् , राेगसँग लड्ने क्षमता बढाउनुहाेस्
3 days ago mygyanbigyan
अनुहार सुन्दर बनाउने चाहना भए व्युटी फुड्सको प्रयोग गर्नुस्
बनारमा उपलब्ध विभिन्न व्युटी प्रोडक्टद्वारा अनुहारलाई आकर्षक बनाउन त सकिन्छ तर त्यस्ता प्रोडक्टको प्रभाव क्षणिक हुने गर्छ । यसको सट्टा…
माछा स्वास्थ्यका लागि के – के फाइदा र बेफाइदा छ त ? थाहा पाउनुहाेस्
वर्षैभरी खान मिल्ने र सहज रुपमा सरिरले पचाउने खाना हो माछा । अन्य मासुजन्य उत्पादनभन्दा बहु उपयोगी गुण भएको मानिने…
ज्यानलाई कुनै गडबडी हुनसाथ हामी कहाँ जान्छौ ? डाक्टरकहाँ । हामीलाई विश्वास छ, डाक्टरले नै हाम्रो रोग पत्ता लगाइदिन्छ ।…